Izindaba - I-Foregene Covid-19 Nucleic Acid Detection Kit idlulise isitifiketi se-EU CE kanye neSingapore HSA
I-Foregene Covid-19 Nucleic Acid Detection Kit idlulise isitifiketi se-EU CE kanye neSingapore HSA
Ekuqaleni kobhubhane, u-Foregene wasinaka kakhulu, futhi wahlela ucwaningo lwesayensi ngokushesha ukuze atshale imali ku-R & D yamakhithi amasha wokuthola i-coronavirus nucleic acid. Ngokuya ngeminyaka yokuqongelela kwezulu lobuchwepheshe kanye nesipiliyoni, iqembu lisebenzise ubuchwepheshe be-Direct PCR patent ukuthuthukisa ngokushesha ikhithi entsha yokuthola i-coronavirus (SARS-CoV-2).
Leli khithi alidingi ukukhipha i-nucleic acid kusampula, futhi lingenza ukutholwa kwe-PCR yesikhathi sangempela se-fluorescent ngemuva kokucubungula okulula kwe-nucleic acid, okwenza inqubo eyisampula yangaphambi kokucubungula kube lula, igwema ukulahleka kwe-nucleic acid yesampula, futhi uthola umphumela wokuhlolwa kungakapheli ihora eli-1, ikakhulukazi elifanele izidingo ezinkulu zokuhlola ngokushesha.
Ngokwanda komqedazwe emhlabeni jikelele, njengelungu lezinkampani ze-IVD zaseChina, uForegene naye ubhekene nomsebenzi obalulekile wokulwa nobhubhane lomhlaba jikelele. Ikhithi ithole isitifiketi se-EU CE ekupheleni kukaMashi. Maphakathi no-Ephreli, u-Foregene kanye no-BIOWALKER PTE LTD, eSingapore, badlulisa ukubhaliswa kwe-Health Sciences Authority (HSA) yaseSingapore (Health Sciences Authority, HSA), okusho nokuthiIForegene inganikeza usizo emazweni aphesheya kwezilwandle adinga izinto zokuvikela igciwane.
Ngokuzayo, abakwaForegene bazogcina isimo sengqondo sesayensi esiqinile futhi baqhubeke nokuhlinzeka ngemikhiqizo nezinsizakalo ngokusebenza okuphezulu kanye nekhwalithi ethembekile ezimakethe ezimbili ezinkulu zocwaningo lwesayensi nokuxilongwa.